Sunny Deol “Hal iyo labo filim iga guul dareesteen kama dhigno inaan caawiye noqon doono” – Filimside.net
Sunny Deol “Hal iyo labo filim iga guul dareesteen kama dhigno inaan caawiye noqon doono”
Super star Sunny Deol waa 62-jir haddana weli wuxuu ka mid yahay atoorayaasha Bollywood-ka ugu awooda badan inkastoo sanadihii ugu dambeeyay aflaan kala duwan ka guul dareesteen haddana Sunny midaas wax walaac ah kuma heyso.
Sunny oo aad ugu mashquulsan filimka Pal Pal Dil Ke Paas ee wiilkiisa Karan Deol lagu soo caan bixinaayo ayaa Bombay Times uga jawaabay su’aal ku aaday hoos u dhaca heesto wuxuuna yiri “Hal filim iyo labo filim oo iga guul dareesteen kama dhigno inaan caawiye noqon doono weli waxaan leeyahay awood aan filimada ku hogaamiyo.”
“Midda kale xiligaan la joogo Bollywood-ka ma sameyn karaan aflaan tayo wanaagsan waana sababta keentay in jilaayaasha caanka ah oo aan aniga ka mid ahay inay sameeyaan aflaan sheeko ahaan u qalmin taageerayaashooda inay daawadaan.”
Sunny Deol ayaa la weydiiyay in lasoo gaaray xiligii uu filimada door aabo, walaal ama caawiye ku matali lahaa wuxuuna yiri “Aniga door walbo inaan matalo diyaar ayaan u ahay waxaan jeclahay tusaale ahaan halyee Clint Eastwood doorarkiisa oo kale filimada inaan ku matalo waayo isaga filim walbo hogaamiye kama ahan haddana doorkiisa waa udub dhexaadka sheeko walbo uu kasoo muuqdo.”
Sunny Deol ayaa sheegay ugu dambeyntii inuu dhawaan duubis ku bilaabi doono Director Rajkumar Santoshi filimka uu u sameenayo ayagoo labadan horey u wada sameeyeen aflaan hirgaleen sida Ghayal (1990), Damini (1993) iyo Ghatak sidoo kalena Sunny wuxuu sheegay inuu si adag u shaqeyn doono sidoo kalena filimo kala duwan sheeko ahaan saxiixan doono.
Waxaa Aqrisay 341